people Nepal » ‘झापाका व्यापारीबाट केपी ओलीलाई घुस बुझाउन एक अर्ब उठाएको डाटा मसँग छ’ ‘झापाका व्यापारीबाट केपी ओलीलाई घुस बुझाउन एक अर्ब उठाएको डाटा मसँग छ’ – people Nepal
‘झापाका व्यापारीबाट केपी ओलीलाई घुस बुझाउन एक अर्ब उठाएको डाटा मसँग छ’
Posted on August 9, 2021 by Tara Nidhi
प्रदेश एकका प्रदेश सभा सदस्य ईन्द्र बहादुर आङबोले केहीदिन अघि प्रदेश सभामा गरेको संबोधनलाई लिएर चौतर्फी टिप्पणी भइरहेको छ । निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका आङबोले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ज्ञानेन्द्र सरकारले पनि गर्न नसकेको ऐतिहासिक भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनले संसदमै लगाए । झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटको ३ सय ४१ विघा जग्गा संघीय सरकारले भूमि सुधार ऐन नै संशोधन गरेर भूमाफिया र दलाललाई बुझाएको उनको आरोप छ । आखिर गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण के हो ? यसको विवाददेखि अनियमिततासम्मको आरोपबारे आङबोसँग दियोपोस्टले केही जिज्ञासा राखेको थियो । प्रस्तुत छ उनीसँग दियोपोस्टका लागि सुदीप विश्वकर्माले गरेको अन्तर्वार्ताको पूर्णपाठ
गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा विवाद के हो ?
– यो भूमि सुधार ऐन २०२१ आउनु अघिको कुरा हो । जब हदबन्दी लगाउने कुरा आयो । अरु कम्पनिहरुले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा किनेर कम्पनिको नाममा ल्याएका हुन् । नेपालमा रहेका २ सय ६९ वटा कम्पनिले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेर कम्पनिको नाममा राखेका छन् । झापाको गिरीबन्धु टि स्टेट लगायत चारवटा कम्पनिहरुले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नै आफ्नो कम्पनिमा राखेका हुन् । किनेका होइनन् । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उनीहरुको नाममा राख्दा सरकारसँग उनीहरुको सम्झौता के छ भने जुनदिनसम्म चिया बगान हामीले सञ्चालन गर्छौं त्यतिबेलासम्म चियाबगान चल्छ । सञ्चालन गर्न नसकेको बेला हामीले राज्यलाई बुझाइदिन्छौँ भनेर हस्ताक्षर गरेको छ ।
यो जग्गा राज्यकै हो ?
त्यो जमिन राज्यको हो । हदबन्दी भन्दा बढीको जमिनमा उनीहरुको संरक्षण मात्रै हो । हदबन्दी भन्दा बढीको जमिन सरकारले जफत गरेर लैजाने थियो । जफत हुने जमिनलाई उनीहरुले कम्पनिको नाममा राखेको हो । अहिले उनीहरुले चियाबारी सञ्चालन गरिराखेका छन् । चिया कम्पनि नाफामा चलिराखेको छ । हजारौँ मजदुरहरुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी रोजगारी पाएका छन् । त्यहाँको पर्यावरणको हिसाबले पनि राम्रो छ । अहिले यो जग्गा विर्तामोड बजारमा फैलिसकेपछाडी मुल्य महँगो भयो ।
देशका ठूला मिडिया यसमा चुपचाप छन् । मेरो दाबी के छ भने यो त ललिता निवास भन्दा सयौँ गुणा ठूलो भ्रष्टाचार हो । राज्यको सम्पत्ति भूमाफिया र दलाललाई दिने जुन निर्णय भएको छ यो अर्बौंको चलखेल र कमिशन लिएर काम गरिएको छ । बाँकी रहेको ९४ कम्पनिले निवेदन दिएको छ भने अब भोलीको सरकारले दिने कि नदिने त ? नदिने हो भने एउटा नजिर बन्छ दिने हो भने देश सकिन्छ । यो असाध्यै ठूलो र कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार हो । ललिता निवास भन्दा धेरै गुणा ठूलो भ्रष्टाचार हो । यसलाई मिलाउन भूमाफियाहरुले अधिकांश ठाउँमा प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन् ।
राजा ज्ञानेन्द्रकै पालादेखि यो बगान सार्ने र सस्तो जग्गासँग सट्टा भर्ना गर्ने र त्यो ठाउँमा जग्गा प्लटिङ गर्ने खेल भएको हो । धेरै विवादित हुने भएका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आँट गरेनन् । नेपालमा लोकतन्त्रीक गणतन्त्र आएपछि बनेका सबै प्रधानमन्त्रीले यो जग्गा सट्टापट्टा गर्न निरन्तर कोशिस गर्दै आएका थिए । कुनै न कुनै रुपमा त्यो सुचना हामीले पाइराखेका थियौँ । हामीले हाम्रा निकटका मान्छे मार्फत यो काम गर्न हुँदैन भन्ने कुरा विगतदेखि उठाउँदै आएका छौँ । यो राज्यको सम्पत्ति हो । किन भने जुन दिन कम्पनि चल्न सक्दैन त्यो दिन राज्यको सम्पत्ति हुन्छ भनेर कागजै गरेको छ । भूमाफियाको चंगुलमा परेर यो जग्गा सट्टा पट्टा गर्न हुन्न भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ ।
२०७७ सालमा ओली सरकारले भूमि सुधारको १८ औँ ऐन संशोधन गर्यो । त्यहाँ उनीहरुले के घुसाए भने,‘सरकारले जफत गर्ने वा सरकारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने ठाउँमा स्थानान्तरण वा सट्टा पट्टा गर्न पाउने’ ।
त्यो गर्न पाउने तजबिजको अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई दिएको छ । यो धेरै ठूलो नितिगत भ्रष्टाचार हो । अस्ति पद्मा अर्यालले फेसबुक स्ट्याटस मार्फत म समलग्न छैन भनेर लेखिन् । वास्तवमा तिनी अपराधी हुन् ।
तपाईंहरुको विरोधको बाबजुत कसरी यो जग्गा सट्टा पट्टा गर्ने निर्णय भयो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि नै यो चहलपहल शुरु भयो । प्रचण्ड र शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि यो जग्गा सट्टापट्टा गर्ने चलखेल भएको थियो । तर, त्यतिखेर लोकदर्शन रेग्मी भूमी सुधार मन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै यो फाइल अघि बढ्न दिनुभएन । यसमा लोकदर्शन रेग्मीको निकै राम्रो भूमिका छ । उनी जब मुख्यसचिव भए । फेरी भूमाफियाहरुले सट्टापट्टा गर्ने चलखेल गरे । त्यतिबेला रेग्मीले यदि गर्नेनै हो भने कानुन बनाएर मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले आफूले थेग्न नसकेपछि यस्तो सुझाव दिएका थिए । २०७७ सालमा ओली सरकारले भूमि सुधारको १८ औँ ऐन संशोधन गर्यो । त्यहाँ उनीहरुले के घुसाए भने,‘सरकारले जफत गर्ने वा सरकारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने ठाउँमा स्थानान्तरण वा सट्टा पट्टा गर्न पाउने’ ।
त्यो गर्न पाउने तजबिजको अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई दिएको छ । यो धेरै ठूलो नितिगत भ्रष्टाचार हो । अस्ति पद्मा अर्यालले फेसबुक स्ट्याटस मार्फत म समलग्न छैन भनेर लेखिन् । वास्तवमा तिनी अपराधी हुन् । किन भने जुन कानुन उनले संशोधन गरिन् त्यो कानुनले त २ सय ६९ वटै कम्पनिले मुल्यवान जग्गाहरु सट्टापट्टा गर्न पाउने भए । यो कानुन बनाएपछि झापामा रहेको पूर्वराजाको हिमालयन चिया बगानले आफ्ना नाममा रहेको ५ सय ७१ विघा जमिन सट्टा पट्टाका लागि भूमि सुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । यो जग्गा असाध्यै मुल्यवान छ ।
त्यो लगायत ७४ वटा निवेदन परेको छ । यस्तो कानुन बनाइन् जसको लु पोल मन्त्रिपरिषद्मा छ । यसमा उनले आफू समलग्न छैन भन्न पाउने छैन । यो सबै उनको समलग्नतामा यो कनुन बनेको छ । यो कानुन नै सबैभन्दा ठूलो नितिगत भ्रष्टाचार हो ।
यो कानुन ल्याउँदैछु भनेर रियल स्ट्रेटमा लागेका धेरै मानिसँग पैसा उठाइएको छ । यो सबै प्रधानमन्त्रीकै चहानामा मुल्यवान जग्गाहरु सट्टापट्टा गरेर धेरैभन्दा धेरै कमिशन बटुलेर यस्तो नितिगत व्यवस्था गरिएको हो । शिवमाया तुम्बाहाम्फे कानुन मन्त्री र पद्मा अर्याल भूमिसुधार मन्त्री भएको बेला यो सबैभएको छ । यसकारण यो धेरै ठूलो नितिगत भ्रष्टाचार हो ।
यति ठूलो अनियमिततामा पद्मा अर्याल मात्रै समलग्ना हुन सक्छिन् र ?
यसमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको भेष्ट्रेड इन्टे«स्ट बिना यो हुने कुरै होइन । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पद्मा अर्यालले गरेको नितिगत भ्रष्टाचार हो । यो कानुन ल्याउँदैछु भनेर रियल स्ट्रेटमा लागेका धेरै मानिसँग पैसा उठाइएको छ । यो सबै प्रधानमन्त्रीकै चहानामा मुल्यवान जग्गाहरु सट्टापट्टा गरेर धेरैभन्दा धेरै कमिशन बटुलेर यस्तो नितिगत व्यवस्था गरिएको हो । शिवमाया तुम्बाहाम्फे कानुन मन्त्री र पद्मा अर्याल भूमिसुधार मन्त्री भएको बेला यो सबैभएको छ । यसकारण यो धेरै ठूलो नितिगत भ्रष्टाचार हो ।
नेकपामै हुँदा यो विषय उठेको थियो तर विरोध हुन्छ भनेर सरकारले काम अघि बढाएन । जब विरोध हुने ठाउँ संसद पनि विघटन गरियो अनि त्यसपछि संसदलाई समेत छलेर यो कानुन सार्वजनिक गरियो । पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ६ गते मात्रै यो राजपत्रमा छापिएको छ । महन्त ठाकुरलाई सरकारमा ल्याएपछि मन्त्रिपरिषदबाट यो निर्णय गराएका छन् । सट्टापट्टाका लागि सरकारले गरेको पत्र झापा मालपोतमा पनि आइसकेको छ । गत असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जग्गा सट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ । २८ गते उहाँले राजिनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिनु भएको छ । त्यही चार पाँच दिनको बीचमा झापामा पत्र आइसकेको छ । यति छिटो हाम्रो सरकारी संयन्त्रले काम गर्छ ?
यो जग्गा प्रकरणको माफिया को–को हो ?
यसको मुख्य नेतृत्वकर्ता भनेको दिपक मलहोत्रा हो । नयाँ पत्रिका बाहेक अरुले यो विषय उठाएको पनि छैन । देशका ठूला मिडिया यसमा चुपचाप छन् । मेरो दाबी के छ भने यो त ललिता निवास भन्दा सयौँ गुणा ठूलो भ्रष्टाचार हो । राज्यको सम्पत्ति भूमाफिया र दलाललाई दिने जुन निर्णय भएको छ यो अर्बौंको चलखेल र कमिशन लिएर काम गरिएको छ । बाँकी रहेको ९४ कम्पनिले निवेदन दिएको छ भने अब भोलीको सरकारले दिने कि नदिने त ? नदिने हो भने एउटा नजिर बन्छ दिने हो भने देश सकिन्छ । यो असाध्यै ठूलो र कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार हो । ललिता निवास भन्दा धेरै गुणा ठूलो भ्रष्टाचार हो । यसलाई मिलाउन भूमाफियाहरुले अधिकांश ठाउँमा प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन् ।
तपाईंले भनिरहेको भ्रष्टाचारको ठोस प्रमाण तपाईंसँग के छ ? जुन तपाईंले संसदमै बोल्नु भयो नी ?
मैले भनेको हुँ । यो जग्गाको मुख्य मान्छे छत्र गिरी हो । उनले ज्ञानेन्द्र सरकारको पालामा पनि सट्टा पट्टा गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीकोमा पनि उनीहरु बारम्बार पुगे तर, सकेनन् । ओली सरकारले यहि जग्गाका लागि कानुन संशोधन गरेर भूमि सुधार ऐनको १८ औँ संशोधन गरिएको छ । सामान्य कुरा यो चिया बगानको जग्गा कठ्ठाको करोडभन्दा माथि पर्छ । यिनीहरुले झापाको पृथ्वीनगर भन्ने ठाउँमा लगेर चिया बगान सार्ने भनेका छन् । जहाँको जग्गा प्रति विघा १५/२० लाख रुपैयाँ पर्छ । जुन भारतीय सिमानाको जमिन हो । त्यहाँ चियाबारी बनाउँछु भनेर सट्टा पट्टा गर्न खोजिरहेका छन् । त्यो जमिनमा अर्बौं पैसा आउनेवाला छ ।
एक अर्बभन्दा बढी झापाबाट उठाएको डाटा मसँग छ । कतिपयको नाम नखुलाउँ । व्यक्तिगत गोपनियताको कुरा पनि हो । झापाका प्रतिष्ठित व्यापारीबाटमात्रै एक अर्ब उठाइएको छ । त्यो साँचो हो ।
यो चियाबारीको जमिनका लागि कमिशन बुझाउन झापाबाट मात्रै एक अर्बभन्दा बढि पैसा उठाएको छ । निर्णय मात्रै गराउन विर्तामोड आसपासबाट उठाइएको हो । जसको जग्गा खरिद प्रक्रिया शुरु भएकै छैन । मन्त्रिपरिषदको बैठक निर्णय गराउनकै लागि एक अर्ब पैसा उठाइएको छ । मैले सुनेको छु काठमाडौंमा पनि दर्जनौँ व्यापारीबाट पैसा उठाइएको छ । ती पैसा किन उठाइयो ? क्याबिनेटमा निर्णय गराउनका निम्ती त्यो पैसा उठाइनु भनेको प्रमाण होइन र ? अर्बौं पैसा लिएर निर्णय गरेको छ । यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार के हुनसक्छ ?
तपाईंको आसयअनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले नै त्यो पैसा बुझेर निर्णय गरेका हुन् ?
तत्कालिन बालुवाटार अर्थात प्रधानमन्त्री ओलीले नै पैसा बुझेर निर्णय गरेका हुन् । भोली निर्णय गरेपछि भोली दिन्छ भनेर के आधारमा निर्णय गर्छ ? भोली प्रश्न उठ्छ भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । राज्यको सम्पत्ति विचौलिया र माफियालाई दिँदाखेरी प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरा दुनियालाई थाहा छ । त्यो पैसा कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अर्बौं पैसा लिएर मात्रै यो निर्णय गरिएको छ । काठमाडौं र झापाका धेरैभन्दा धेरै व्यापारीले पैसा उठाएका छन् । एक अर्बभन्दा बढी झापाबाट उठाएको डाटा मसँग छ । कतिपयको नाम नखुलाउँ । व्यक्तिगत गोपनियताको कुरा पनि हो । झापाका प्रतिष्ठित व्यापारीबाटमात्रै एक अर्ब उठाइएको छ । त्यो साँचो हो ।
ओली सरकारलाई घुस खुवाउनकै लागि उठाइएको हो ?
हो । कमिशन खुवाएर निर्णय गराउनका लागि उठाइएको हो । त्यसकारण मैले भनेको छु । इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार हो । ज्ञानेन्द्रले आँट नगरेको भ्रष्टाचार गरेर ओली सरकारले यो निर्णय गरेको हो । चानचुने होइन । भोली पैसा नउठ्ने हो भने ओलीले निर्णय नै गर्दैन थिए । नत्र भने आफ्नो जिल्लामा यस्तो गर्ने आँट नै ओलीले गर्ने थिएनन् । बीरबल भन्ने डाँकाले त बाहिरबाट लुटेर ल्याएर आफ्नो गाउँमा बाढ्ने् गरेको थियो । झापामा यत्रो ठूलो प्रोजेक्ट गर्दा चानचुने पैसाले हुँदैन ।
यति ठूलो घोटाला हुँदा त्यहाँको राजनीतिक कार्यकर्ताको किन विरोध भएन ?
हामीले विरोध गरिरहेका छौँ । झापामै पनि ओली एमालेबाहेकका नेता कार्यकर्ता विरोधमा हुनुहुन्छ । माधव नेपाल समुहसहित सबैदलले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने कुरा हुँदैछ । जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधि मण्डल अहिले काठमाडौंको सबै ठाउँमा ध्यानाकर्षण गर्दै हुनुहुन्छ । प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवदेखि सबैलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको छ । यो विषय उठाउनु पर्यो । धेरै राज्यको सम्पत्ति लुटिँदै छ भन्ने विषयमा कुरा उठाउँदै छन् । यो कुनै पनि हालतमा खारेज हुनुपर्छ र फिर्ता हुनुपर्छ भनेर झापाको सबै राजनीतिक दलको माग छ । यतिका ठूलो घोटाला भएको विषयमा मान्छेहरुलाई थाहा नै छैन । हामीले नै केही पत्रिकालाई सुचना दिएर यो घटना बाहिर ल्याएका हौँ । अरु मिडियाले लेख्नै आँट गरेनन् ।
किन अरु मिडियाले यस विषयमा बोलेनन् ?
किन भने यसमा धेरैको साझेदारी छ । धेरैको कमिशन बाँडफाँड छ । धेरै मिडिया मालिक पनि यहाँ समलग्न छन् ।
को–को मिडिया मालिक छन् तपाईं विस्तृतमा खुलाउन सक्नुहुन्न ?
म मिडिया मालिकको नाम भन्दिनँ । नेपालको प्रतिष्ठित मिडिया मालिक यसमा हुनुहुन्छ जो काठमाडौंमा हुनुहुन्छ । जसले आफ्नो मिडिया हाउसमा काम गर्ने पत्रकारलाई तलब समेत दिएका छैनन् । पारिश्रमिक नदिएर आन्दोलन समेत भएको छ ।
तपाईं नै मन्त्री भएको प्रदेश सरकार किन यो घटनाबारे बेखबर जस्तै रहयो ?
भूमि सम्बन्धी अधिकार भनेको तीन वटै सरकारको साझा अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ । ठूला ऐन बन्दा वा निर्णय हुँदा तीन वटै तहको सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । खासमा प्रदेश सरकारको अनिवार्य स्विकृति चाहिन्छ । प्रदेश सरकारलाई कुन दिन हो कुन रात हो भन्ने पनि थाहा छैन । कित उहाँहरुले हामीलाई थाहा छैन बेखबर छौँ भन्न पर्यो । कित अधिकार क्षेत्र मिचिएको कुरा बोल्न पर्यो । कि होइन भने यो भ्रष्टाचार र अनियमिततामा हाम्रो पनि संलग्न छु भन्न पर्छ । यदि होइन भने संघीय सरकारले हाम्रो भूमिको विषयमा हामीलाई कुनै पनि सहमति नलिई निर्णय गरेकाले असंवैधानिक भएको छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । यसलाई बदर गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर केन्द्र सरकारलाई पठाउनुपर्छ । होइन भने यो नितिगत भ्रष्टाचारमा उहाँहरुको पनि समलग्नता देखियो । प्रदेशको स्वीकृति बिना अहिले केही गर्नै मिल्दैन ।
कालीगण्डकी करिडोरमा दुई वटा प्रदेशबीच विवाद उठेको छ । गण्डकी प्रदेशले विरोध गरेको छ । यो त जमिनमाथिको कुरा हो नी । जमिनको कुरा हामीलाई थाहा नदिई किन निर्णय गरियो भनेर प्रदेश सरकारले सोध्न सक्नुपर्छ । यदि बोल्दैन भने उनीहरुको पनि यो भ्रष्टाचारमा सलग्न देखियो नी ।
यो कम्पनिले अर्को कम्पनिलाई किनबेच गर्न किन नपाउने भन्ने तर्क पनि छ नी यसमा के भन्नु हुन्छ ?
यो कम्पनिका अध्यक्ष छत्र गिरीसँग मेरो कुनै चिनजान पनि छैन । कसैको इन्ट्रस्टमा हामीले बोलेको पनि होइन । यो त राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्छ र यति ठूलो भ्रष्टाचार बाहिर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । कुनै सार्वजनिक खपतका लागि बोल्ने कुरा होइन । यो कुनै कम्पनिको जग्गा होइन । यो त हदबन्दी भन्दा बढी राखेको जग्गा हो । यो कम्पनिले अर्को कम्पनिलाई जग्गा किनबेचको कुरा पनि होइन । उहाँहरुले सट्टा पट्टा गर्दैै हुनुहुन्छ । अर्बौंको सम्पत्ति हो ।
केही करोडको सम्पत्ति त्यही पृथ्वी नगरमा किनेर यो चियाबगान सार्ने कुरा हो । यो कुनै कम्पनिलाई बेचेको पनि होइन । यो जग्गा व्यक्तिलाई बेचेर प्लटिङ गर्ने र यही गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा फेरी तल पृथ्वी नगरमा चिया बगान बनाउने खेलमा हुनुुहन्छ । अरु कम्पनिले हदबन्दी अनुसार राखेको जग्गा त कम्पनि चलाउन नसकेको खण्डमा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने भन्ने छ भने यो त हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा हो नी । यो जग्गा त स्वतः राज्यको सम्पति हो नी ।
गिरीबन्धु टी स्टेट चलुन्जेल त्यसले उपभोग गर्न पाउँछ । तर, म चलाउन सक्दिन भनेको भोलीपल्टै त्यो राज्यको सम्पत्ति हो । उहाँहरुले चाहेको खण्डमा बेच्न पाउने कुरा होइन । यो जमिनका विषयमा २०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ । त्यतिबेलै सर्वोच्च अदालतले यो जमिन कुनैपनि हालतमा विक्री गर्न पाइँदैन भनेर यथास्थानमै राख्न आदेश दिएको छ ।
Coppied from Diyopost
पशुपतिनाथको मन्दिर खुला गरिँदै
माओवादी नेताहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँट (सूचीसहित)
सरकारी स्रोतको चरम दुरूपयोग, व्यक्तिगत स्वार्थमा खर्च १५ अर्ब
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, यसरी हेर्न सकिन्छ